Mareykanka oo xiray safaaraddiisa Kenya - Somalia Focus
Mareykanka oo xiray safaaraddiisa Kenya
28,Oct,2016(SofoNews) Ilo wareedyo ay SomaliaFocus ka heleyso dalka Kenya ayaa ku warramaya in safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay Magaalada Nairobe ee Dalka Kenya si ku meel gaar ah loo xiray, kadib markii Nin lagu toogtay Iridka hore ee dhismaha Safaaradda maalintii shalay aheyd.
War qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay inay sii xirnan doonto tan iyo 31-ka bishan Oct, markaasi ayay shaqadeeda dib u bilaabi doontaa, inkastoo hawlaha deg deg ah ay qaban doonto Muwaadiniinteeda Maraykanka ah iyagu way heli doonaan, sida uu sheegay Safiirka Maraykanka.
War-Saxaafadeed laga soo saaray Safaaradda Maraykanka ee Magaalada Nairobe ayaa sidoo akel lagu sheegay in Ninkii toogashada lagu dilay uu heystay Mindi, islmarkaana uu dhowr mar isku dayay inuu gudaha u galo balse ay joojiyeen ilaalada albaabka oo Kenyaan ahaa, wuuna isku adkeeyay, taasi ayaa keentay in ay toogashadu dhacdo.
FPI-da Dalka Maraykanka ayaa baaraysa sida ay wax u dhaceen iyo Ninka la tuhunsan yahay waxa uu damacsanaa.
Xiritaanka safaaradda ayaa salka ku haysa cabsi dhanka amaanka ah inkastoo weli aan si rasmi ah loo haynin dhacdadaasi shalay dhacday iyo wax ay salka ku hayso
Raiisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo saxiixay Buugga Tacsida Amiirkii hore ee Qadar